Ebɛnadze Ntsi Na Ɔsɛ Dɛ Mobɔ Mpaa? | Mbabun Bisa Dɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur America Mmum Kasa Amharic Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Colombia Mmum Kasa Croatian Czech Danish Dutch Ecuador Mmum Kasa Efik English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Georgian German German Mmum Kasa Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luvale Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Maya Mfantse Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Polish Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Vlax, Russia) Russia Mmum Kasa Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tongan Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venezuela Mmum Kasa Vietnamese Waray-Waray Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zulu
Wobisabisaa mbabun bi a wɔwɔ America nsɛm faa mpaabɔ ho, na hɔn mu ɔha mu nkyekyɛmu 80 kãa dɛ wɔbɔ mpaa. Naaso hɔn wɔkãa dɛ wɔbɔ mpaa no mpo no, sɛ ekyɛ hɔn dodow no mu ebien a, kortsee na wɔkãa dɛ wɔbɔ mpaa da biara. Bi a hɔn mu bi bisa hɔnho dɛ: ‘Ana mepɛ dɛ moho baa me ntsi na ɔsɛ dɛ mobɔ mpaa anaa siantsir fofor bi so wɔ hɔ?’
Ebɛnadze nye mpaabɔ?
Ana Nyankopɔn tsie mpaabɔ?
Ebɛnadze na mubotum abɔ ho mpaa?
Mpaabɔ yɛ ɔkwan a yɛfa do nye adze nyina Bɔfo no kasa. Ɔwodze, susu dza iyi kyerɛ ho hwɛ! Jehovah wɔ tum kyɛn nyimpa biara, naaso “ɔnye hɛn mu biara ntamu kwan nnwar.” (Asomafo Ndwuma 17:27) Nokwasɛm nye dɛ, Bible no ma yehu dɛm nsato a ɔyɛ enyigye yi: “Hom ntwe mpin Nyankopɔn, na ɔbɔtwe epin hom.”​—James 4:8.
Ɔkwan kor a ibotum afa do ayɛ dɛm nye dɛ ebɔbɔ mpaa​—iyi nye ɔkwan a efa do nye Nyankopɔn kasa.
Ɔkwan fofor so nye dɛ ibosũa Bible no​—iyi nye ɔkwan a Nyankopɔn fa do nye wo “kasa.”
Sɛ enye Nyankopɔn kasa na ɔno so nye wo kasa​—kyerɛ dɛ sɛ ebɔ no mpaa na isũa Bible no a​—ɔbɔboa ma anyɛnkofa a ɔda ɔwo na Nyankopɔn ntamu no mu aayɛ dzen.
“Jehovah a enye no bɛkasa​—mekyerɛ dɛ adze nyina do tumfo a enye no bedzi nkitaho no​— yɛ ho kwan kɛse a nyimpa biara botum enya.”​—Jeremy.
“Sɛ mekã mbrɛ misi tse nka ankasa ho asɛm kyerɛ Jehovah wɔ mpaabɔ mu a, metse nka dɛ mabɛn no kɛse.”​—Miranda.
Sɛ mpo egye Nyankopɔn dzi​—na ebɔ no mpaa a​—bi a ɔbɛyɛ dzen ama wo dɛ ebɛgye ato mu dɛ otsie wo mpaabɔ. Naaso, Bible no frɛ Jehovah dɛ ‘mpaabɔ tsiefo.’ (Ndwom 65:2) Ɔhyɛ wo nkuran mpo dɛ ‘tow wo dadwen nyina kyen no do.’ Ebɛnadze ntsi a? ‘Osiandɛ ɔdwen woho.’​—1 Peter 5:7.
Susu iyi ho hwɛ: Ana egye ber nye w’anyɛnkofo a ebɛn hɔn papaapa no kasa mpɛn pii? Ibotum so nye Nyankopɔn akasa mpɛn pii. Bɔ no mpaa aber nyina, na sɛ ereyɛ dɛm so a, fa ne dzin Jehovah no dzi dwuma. (Ndwom 86:​5-7; 88:9) Nokwasɛm nye dɛ, Bible no hyɛ wo nkuran dɛ ‘fua asɔryɛ mu’ anaadɛ mma nngyaa mpaabɔ da.​—1 Thessalonicafo 5:​17.
“Mpaabɔ yɛ nkɔmbɔ a menye mo sor Egya no bɔ a mekã m’akoma mu nsɛm nyina kyerɛ no.”​—Moises.
“Mekã me tsirmu nsɛm kyerɛ Jehovah, dɛ mbrɛ mekã me tsirmu nsɛm kyerɛ me maame anaa me nyɛnko berɛbo bi no.”​—Karen.
Bible no kã dɛ: ‘adze nyina mu hom mfa mpaabɔ nye nkotoserɛ nye ndaase mma hom ebisadze ndu Nyankopɔn asomu.’​—Philippifo 4:6.
Aso iyi kyerɛ dɛ ibotum abɔ dza ɔhaw wo no ho mpaa? Nyew! Nokwasɛm nye dɛ, Bible no kã dɛ: “Tow w’adzesoa kyen [Jehovah] do, na obosuo wo mu.”​—Ndwom 55:22.
Naaso, sɛ erobɔ Nyankopɔn mpaa a, ɔnnsɛ dɛ ekã dza ɔhaw wo no ho nsɛm nkotsee kyerɛ no. Akyerɛbaa bi a wɔfrɛ no Chantelle kã dɛ, “Sɛ mboa nkotsee na dabaa mibisa Jehovah a, nna ɔkyerɛ dɛ mennyɛ nyɛnko papa.” Ɔtoa do dɛ “Metse nka dɛ, ɔsɛ dɛ midzi kan da no ase, na ɔsɛ dɛ meda no ase so wɔ ndzɛmba pii ho.”
Susu iyi ho hwɛ: Ebɛnadze na Jehovah ayɛ ama wo wɔ w’asetsena mu a w’enyi sɔ? Ana ibotum adwen ndzɛmba ebiasa a Jehovah ayɛ ama wo ndɛ a ibotum ada no ase wɔ ho?
“Adze ketseketse bi mpo, tse dɛ nhyiren a ɔyɛ fɛw a yɛbɔhwɛ no, botum aka hɛn ma yaabɔ mpaa ada no ase.”​—Anita.
“Dwendwen abɔdze bi a w’enyi gye ho anaa kyerɛwsɛm bi a ɔka w’akoma papaapa ho, na da Jehovah ase wɔ ho.”​—Brian.
“Ɔsɛ dɛ yɛkã dza ɔhaw hɛn nye dza yehia nyina ho asɛm wɔ hɛn mpaabɔ mu. Jehovah pɛ dɛ ɔboa hɛn, na ɔwɔ mu dɛ onyim dza yehia ana yaabɔ no mpaa dze, naaso sɛ yɛkã dza yehia nyina ho asɛm kyerɛ no a, ɔda edzi dɛ yɛwɔ no mu ahotodo.”​—Moises.
“Mpaabɔ tse dɛ ahoma bi a Jehovah kura ne fã kor mu, na emi so mukura ne fã kor no mu. Sɛ mekã m’akoma mu nsɛm kyerɛ Jehovah wɔ mpaabɔ mu a, metse nka dɛ, ahoma ne fã a mukura mu no, mereyer moho esuo mu dzendzenndzen na Jehovah so reyɛ dɛmara ma ntsi ebusuabɔ a ɔda hɛn ntamu no mu reyɛ dzen.”​—Miranda.
“Sɛ yɛannhwɛ yie a, dabaa hɛn mbaabɔ bɛyɛ ebisadze nkotsee. Naaso sɛ yɛda Jehovah ase a, yɛda no edzi dɛ hɛn enyi sɔ ndzɛmba pii a ɔdze ama hɛn no, na ɔmma yɛmmfa hɛn adwen nnsi hɛn nkotsee hɛn do wɔ hɛn mpaabɔ mu.”​—Jeremy.
“Mpɛn dodow a yɛda Jehovah ase no, mpɛn dodow no ara so na enyisɔ a yɛwɔ ma no no bɛyɛ kɛse. Ɔsɛ dɛ yɛda Jehovah ase wɔ hɛn mpaabɔ mu. Dɛm a yɛbɛyɛ no bɛma yɛdze hɛn adwen esi nhyira ahorow a ɔma yenya no do mbom kyɛn dɛ yɛdze besi ɔhaw ahorow a yɛrefa mu no do.”​—Shelby.
Fa mona Fa mona Ebɛnadze Ntsi Na Ɔsɛ Dɛ Mobɔ Mpaa?
ijwyp asɛm 69